ဒူဒူကြီး: Rare Earth (သို့မဟုတ်) နတ်ပေးတဲ့ သတ္တု
Rare Earth (သို့မဟုတ်) နတ်ပေးတဲ့ သတ္တု
Rare earths ကို လန်သန်နိုက် lanthanide series နဲ့ အက်တင်နိုက် actinide series ဆိုပြီး၊ အုပ်စု (၂) မျိုး ခွဲနိုင်ပါတယ်။ rare earth metals တွေဟာ၊ အခြား minerals တွေနဲ့ရောနှောနေတတ်ပါတယ်။ common properties အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်၊ rare earth metals တွေကို တခုနဲ့တခု ခွဲခြားတဲ့အခါ၊ ခဲယဉ်းပါတယ်။ rare earth metals တွေကို silver, silvery-white နဲ့ တခါတရံ gray metals အရောင် အဆင်းနဲ့တွေ့ရ သလို၊ high electrical conductivity metal ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် high luster ဆိုတဲ့ အရောင်တောက်ပတဲ့ metals ဖြစ်ပြီး၊ လေနဲ့ ထိတာနဲ့ tarnish တနည်းအားဖြင့်၊ အရောင်မှိန်သွားတဲ့ သတ္တုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Rare earth ore
Fig. Rare earth oxides
ဟိုးအရင်ကတော့ rare earth elements လို့ခေါါတဲ့ rare earth metals တွေကိုသန့်စင်ဖို့ တနည်းအား ဖြင့် ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ oxides တွေကိုခွဲထုတ်ဖို့၊ tedious processes ကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။ tedious processes မှာ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ အက်ဆစ်ထဲမှာ အရည်ဖျော်ခြင်းနဲ့ organic solvents တွေသုံးကာ၊ extracted ဆိုတဲ့ ကပ်နေတဲ့ rare earth ဒြပ်စင်ကိုဆွဲထုတ်ယူခြင်း စတဲ့နည်းစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ပါတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုလည်း ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်သလို ကုန်ကျစားရိတ်လည်းကြီးမား ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ Ion-exchange and solvent extraction processes ကိုအသုံးပြုကာ၊ သန့်စင် ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါါသန့်စင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ solvent အနေနဲ့အရည်ဖျော်ပြီး aluminium ကို reducing metal အနေနဲ့သုံးကာ၊ container ထဲမှာ sealed လုပ်ပြီး၊ အပူပေးတဲ့ နည်းဖြစ်ပြီး "metal magic" နည်းစဉ်လို့  လည်းခေါါပါတယ်။
container ဟာ stainless-steel tube ဖြစ်ပြီး၊ vacuum-sealed လုပ်ထားပါတယ်။ tube အတွင်းမှာ graphite rings တွေထည့်ထားပြီး၊ rings တွေကိုမှန်မှန်လဲလှယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ container ကိုအပူရှိန် 800 °C မှာ၊ (၄) နာရီခန့်အပူပေးပြီး၊ 1000 °C မှာထပ်မံအပူပေးကာ၊ room temperature နဲ့ပြန်လည် အအေးခံယူပါတယ်။ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ oxides တွေဟာ အပူပေးတဲ့အခါ၊ vaporised အနေနဲ့အငွေ့ပြန် သွားပြီး၊ အအေးပြန်ခံတဲ့အခါ၊ deposited အနေနဲ့ graphite rings တွေမှာသွားစုပါတယ်။ container ထဲမှာတော့ purified rare earth သာ ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ "metal magic" နည်းစဉ်ကို၊ (၂၀၀၀) ခုနှစ် မှာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုဟိုကူတက္ကသိုလ်မှ၊ သတ္တုဗေဒပညာရှင်၊ တက်ဆူယာအူဒါနဲ့ အဖွဲ့က ရှာဖွေထုတ်ဖော် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ solvent အနေနဲ့ အရည်ဖျော်တဲ့ အခါ၊ ကလိုရင်းကိုသုံးပြီး trichlorides compounds တွေအဖြစ် အရည်ဖျော်ပြီးမှ၊ အပူပေးခြင်း၊ အအေးခံခြင်းတို့ဖြင့် ဒြပ်စင်အဖြစ် ရယူခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
အမေရိကားမှာ မတူးရသေးတဲ့ rare earth တန်ချိန် သန်း (၁၃၀) ရှိပါတယ်။ တရုပ်က တင်ပို့နေတဲ့ rare earth တွေဟာ မွန်ဂိုလီးယား မှထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ore လို့ခေါါတဲ့ သတ္တုရိုင်းအနေနဲ့ တူးဖော်ပြီး၊ tedious processes တွေအသုံးပြုကာ၊ သန့်စင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သဘာဝတွင်းထွက်သတ္တုရိုင်းဖြစ်တဲ့ rare earth ore တွေကို၊ သန့်စင်လိုက်တဲ့အခါ rare earth element လို့ခေါါတဲ့ rare earth ဒြပ်စင်တွေ၊ ရရှိလာပါတယ်။ ရလာတဲ့ ဒြပ်စင်တွေကို လန်သန်နိုက် lanthanide series နဲ့ အက်တင်နိုက် actinide series ဆိုပြီး၊ အုပ်စု (၂) မျိုးခွဲနိုင် ပါတယ်။ လက်ရှိအသုံပြုနေတဲ့ rare element ဒြပ်စင်တွေဟာ lanthanide series အုပ်စုမှဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်း (၁၇) မျိုးရှိပါတယ်။
Fig. Periodic table of elements with the rare earth elements highlighted
rare earth ဒြပ်စင်အဖြစ် အသုံးပြုနေတဲ့ elements (၁၇) မျိုးကတော့ Scandium (Sc), Yttrium (Y), Lanthanum (La), Cerium (Ce), Praseodymium (Pr), Neodymium (Nd), Promethium (Pm), Samarium (Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysprosium (Dy), Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Tm), Ytterbium (Yb) နဲ့ Lutetium (Lu) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Yttrium ဆိုတဲ့ element ရဲ့ အမည်ကတော့ ကမ္ဘာပေါါမှာ ပထမဆုံး rare earth ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ၊ ရွာလေးတရွာရဲ့ အမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ytterbite ဆိုတဲ့ အမဲရောင် သတ္တုရိုင်းကို၊ (၁၇၈၇) ခုနှစ် မှာ၊ Lieutenant Carl Axel Arrhenius ဆိုသူ ဆွီဒင် အမြှောက်တပ်မှ၊ စစ်ဗိုလ်လေးတဦး က၊ တွေ့ရှိ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (၁၈၀၀) ခုနှစ်မှာတော့ ytterbite သတ္တုရိုင်းကို gadolinite လို့ အမည်ပြောင်း လဲခေါါ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ gadolinite ဟာ cerium compound ဖြစ်ပြီး၊ yttrium, iron, silicon နဲ့ အခြား element တွေရောနှော ပါဝင်နေပါတယ်။
သန့်စင်ပြီး element ဖြစ်တဲ့ Scandium ကို၊ Light aluminium-scandium alloy အနေနဲ့ aerospace components တွေမှာ အသုံးပြုသလို၊ Mercury-vapor lamps တွေမှာလည်းရောစပ် အသုံးပြုပါတယ်။ Yttrium ကိုတော့ Yttrium-aluminum garnet (YAG) laser, yttrium iron garnet (YIG) microwave filters တွေနဲ့ europium နဲ့ရောစပ်ပြီး၊ high-temperature superconductors တွေအဖြစ် အသုံးပြုပါ တယ်။
Fig. Flow diagram ofaFluid Catalytic Cracking unit in petroleum refineries
Lanthanum ကို High refractive index glass, flint, hydrogen storage, battery-electrodes နဲ့ camera lenses တွေမှာ အသုံးပြု သလို၊ oil refineries တွေမှာ၊ catalys တနည်းအားဖြင့် fluid catalytic cracking unit အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ Cerium ကိုတာ့၊ Chemical oxidizing agent, polishing powder, yellow colors in glass and ceramics, self-cleaning ovens တွေရဲ့ catalyst အနေနဲ့ အသုံးပြု သလို၊ lighters တွေရဲ့ ferrocerium flints အနေနဲ့လည်း၊ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် oil refineries တွေ မှာလည်း၊ fluid catalytic cracking catalyst အနေနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။
Praseodymium ကို၊ Rare-earth magnets, lasers, carbon arc lighting တွေအပြင်၊ enamels ဆိုတဲ့ သုတ်ဆေးတွေနဲ့၊ မှန်တွေမှာ အရောင်ထည့်သွင်းဖို့ colorant အနေနဲ့အသုံးပြုသလို၊ welding goggles တွေရဲ့ didymium glass တွေမှာလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြု ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ferrocerium firesteel (flint) products ဆိုတဲ့သဘာဝ metallic material မဟုတ်ပဲ၊ လူတွေဖန်တည်းတဲ့ man made metallic material ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်။ Ferrocerium ဟာ 1,650 °C မှာ၊ hot sparks တွေအများအပြား ထုတ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ ridged steel လို rough surface တွေမှာ၊ ferrocerium မှထွက်လာတဲ့ hot sparks တွေဟာ၊ scraped အနေနဲ့ ခြစ်ထုတ် ဖယ်ရှားပြီး၊ rough surface ကိုချောမွေ့ သွားစေပါတယ်။ clockwork toys တွေ၊ welding torches တွေနဲ့ emergency survival kits တွေ အတွင်းမှ၊ "flint-and-steel" fire-starters တွေမှာလည်း၊ ferrocerium ကို အသုံးပြုပါတယ်။
Neodymium ဆိုတာကတော့ ဂရိဝေါဟာရ၊ "neos" ဆိုတဲ့ new ရယ်၊ "didymos" ဆိုတဲ့ twin ရယ် ကို၊ ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Neodymium ကို Rare-earth magnet ဆိုတဲ့ strong permanent magnet တွေထုတ်လုပ်ရာမှာအသုံးပြုသလို၊ ကြွေနဲ့ မှန်တွေမှာ ခရမ်းရောင်၊ အရောင်အသွေးရဖို့ ထည့်သွင်း အသုံးပြုပါတယ်။ ceramic capacitors တွေကိုလည်း neodymium ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ် ပါတယ်။ Promethium ကို Nuclear batteries တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Nuclear batteries ဆိုတာ ကတော့ radioactive isotope တွေသုံးပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်တဲ့၊ atomic battery, nuclear battery, tritium battery အစရှိတဲ့ radioisotope generator တွေဖြစ်ပါတယ်။
Samarium ကိုတော့ Rare-earth magnets, lasers နဲ့ neutron capture တွေမှာအသုံးပြုသလို၊ Microwave Amplification အတွက် coherent electromagnetic waves တွေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့၊ Maser တွေမှာလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်။
Europium ကို၊ mercury-vapor lamps, lasers တို့အပြင် CRT - Cathode ray tube တွေနဲ့ fluorescent lights ဆိုတဲ့ မီးချောင်းတွေမှာ၊ အနီရောင်နဲ့ အပြာရောင် phosphors တွေရရှိဖို့၊ အသုံးပြု ပါတယ်။ NMR ဆိုတဲ့ Nuclear magnetic resonance တနည်းအားဖြင့် magnetic field absorb and re-emit electromagnetic radiation တွေမှာ၊ relaxation agent အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Gadolinium ဆိုတာကတော့၊ ဖင်လန်သတ္တုဗေဒပညာရှင် Johan Gadolin ကို၊ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ computer memories တွေဟာ gadolinium element နဲ့ပြုလုပ် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ garnet လို့ခေါါတဲ့ high refractive index glass တွေ၊ X-ray tubes တွေ၊ lasers နဲ့ Rare-earth magnets တွေမှာအသုံးပြုသလို၊ NMR ဆိုတဲ့ Nuclear magnetic resonance တွေမှာ၊ relaxation agent အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MRI လို့ခေါါတဲ့ magnetic resonance imaging မှာ၊ contrast agent အနေနဲ့ အသုံးပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Terbium ကို Green phosphors, lasers နဲ့ fluorescent lamps တွေထုတ်လုပ်ရာမှာအသုံးပြုပြီး၊ Dysprosium ကိုတော့ Rare-earth magnets တွေနဲ့ lasers တွေထုတ်လုပ်ရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Dysprosium ဆိုတာကတော့ ဂရိဝေါဟာရ၊ "dysprositos" မှဆင်းသက် လာပြီး၊ hard to get လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
Holmium ဒြပ်စင်ကို lasers တွေထုတ်လုပ်ဖို့၊ အသုံးပြုသလို Erbium ကိုတော့ lasers နဲ့ vanadium steel တွေထုတ်လုပ်ရာမှာ၊ အသုံးပြုပါတယ်။ Thulium ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်တဲ့ X-ray machines တွေ မှာသုံးပြီး၊ Ytterbium ကိုတော့ Infrared lasers ဆိုတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ chemical reducing agent တွေအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ Lutetium ကို PET Scan detectors တွေနဲ့ high refractive index glass တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။
rare earth element ဒြပ်စင်တွေကို၊ precious metal တွေဖြစ် တဲ့ ရွှေ တို့၊ ငွေတို့လို ဒါမှမဟုတ် non-ferrous metals ဆိုတဲ့ သံမပါတဲ့ သတ္တုတွေဖြစ်တဲ့ nickel, tin, copper နဲ့ aluminum တို့လို၊ exchange-traded အဖြစ်ဈေးကွက်တင်၊ မရောင်းပဲ private market မှာသာ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်၊ အနေနဲ့ သာရောင်းပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ဈေးနှုံးအတိအကျသိဖို့ ခက်ပါတယ်။ တခါတလေ ဒီနေရာမှာ rare earth element ဒြပ်စင်တွေရဲ့ ဈေးနှံးကိုဖော်ပြပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
lanthanide series အုပ်စုမှ rare earth element ဒြပ်စင် (၁၇) မျိုးကိုရောင်းတဲ့အခါ၊ pure form အနေနဲ့ ရောင်းခြင်းမဟုတ်ပဲ mixtures of varying purity ဆိုတဲ့ သန့်စင်မှုရာခိုင်နှုံးကို "Neodymium metal ≥ 99.5%" အစရှိ သလို၊ ဖော်ပြပြီးရောင်းဝယ်ကြပါတယ်။ end user application အရ၊ rare earth elements တွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ဈေးနှုံးကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
Fig. Composite image of Kepler's supernova from pictures by the Spitzer Space Telescope, Hubble Space Telescope, and Chandra X-ray Observatory.
rare earth ဟာ သံဆိုတဲ့ iron ထက်လေးပါတယ်။ Supernova Nucleosynthesis မှတဆင့် ကမ္ဘာ့ အပေါါယံမြေလွှာမှာပေါါပေါက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Supernova Nucleosynthesis ဆိုတာကတော့ နေ စက်ြဝဋ္ဌာမဟာကြယ်စင်တန်းပေါက်ကွဲမှု တနည်းအားဖြင့် supernova ဆိုတဲ့ stellar explosion မှတဆင့်၊ chemical elements လို့ခေါါတဲ့ ဒြပ်စင်အသစ်တွေပေါါပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေစက်ြဝဋ္ဌာ မဟာ ကြယ်စင်တန်းပေါက်ကွဲမှုကတဆင့် ဖြစ်လာတဲ့၊ သတ္ကုမို့ rare earth တွေကို၊ "နတ်ပေးတဲ့သတ္တု" ရယ်လို့ နာမည်ပေးကြည့်ပါမယ်။ radio active ဆိုတဲ့ အနုမြူဓါတ်သတ္တိကြွမှုရှိတဲ့ promethium ဒြပ်စင်ကလွဲလို့၊ ကျန် rare earth elements တွေကို၊ minerals တွေအဖြစ် earth's crust လို့ခေါါတဲ့ ကမ္ဘာာ့အပေါါယံမြေလွှာ မှာအများအပြားတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Fig. Abundance of elements in the Earth crust per million of Si atoms
rare elements တွေထဲမှ၊ cerium ဟာ၊ copper ကဲ့သို့၊ abundant element အနေနဲ့ ကမ္ဘာာ့အပေါါယံမြေ လွှာမှာ 68 ppm ပမာဏခန့် ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် geochemical properties ဆိုတဲ့ ဘူမိဓါတုဗေဒ ဆိုင်ရာ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိတွေကြောင့်၊ exploitable form အနေနဲ့ မတွေ့ရပဲ၊ exploitable deposit အနေနဲ့ သာတွေ့ရပါတယ်။ exploitable deposit အနေနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ minerals တွေအထဲမှ၊ rare earth element တခုခြင်းအနေနဲ့ သန့်စင်ထုတ်ယူရပါတယ်။ exploitable deposit အနေနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ rare earth ore တွေကို၊ elution method နဲ့ iron exchange method တွေနဲ့၊ ခွဲထုတ်ယူတဲ့အခါ၊ precipitation သို့မဟုတ် crystallisation အနေနဲ့ အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ခွဲထုတ်ယူပါတယ်။ elusion method ဆိုတာ ကတော့၊ solvent ဆိုတဲ့ပျော်ရည် အဖြစ်ဖျော်ပြီး၊ chromatography column မှတဆင့် material တခုနဲ့တခုကို၊ extracting အနေနဲ့ခွဲထုတ် ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Ion exchange method ဆိုတာ ကတော့၊ material ကို electrolytes သို့မဟုတ် electrolyte solution အနေနဲ့ဖျော်စပ်ပြီးမှ ions တွေအဖြစ် ခွဲထုတ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဓိက အုပ်စု (၂) ခုဖြစ်တဲ့ cerium group နဲ့ yttrium group ဆိုပြီး earth deposits တွေကို ခွဲယူပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် solubility ဆိုတဲ့ ပျော်ဝင်နိုင်မှုကိုအခြေခံကာ ခွဲယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ cerium group မှာ scandium, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium နဲ့ samarium တို့ပါဝင်ပြီး၊ yttrium group မှာတော့ yttrium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium နဲ့ lutetium တို့ပါဝင်ပါတယ်။ တခါ europium, gadolinium နဲ့ terbium တို့ကို၊ terbium group အနေနဲ့ထပ်မံခွဲခြားပါတယ်။
solubility အရ europium ကို cerium group ထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်သလို၊ gadoliniun နဲ့ terbium တို့ ကိုတော့ yttrium group မှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ cerium group sodium နဲ့ potassium sulfates တွေကို၊ အသုံးပြုပြီး solvent ဆိုတဲ့ပျော်ရည် အဖြစ်ပြောင်းလဲ လိုက်တဲ့အခါ၊ cerium group မှ earth deposits တွေဟာ၊ double sulfates solution မှာပျော်ဝင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက်၊ tri-sulfates solution တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ terbium group earth deposits တွေကတော့ double sulfates solutions တွေမှာ အနည်းငယ်ပျော်ဝင် နိုင်ပါတယ်။ yttrium group earth deposits တွေဟာ double sulfates solutions တွေမှာပျော်ဝင်မှု အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ပျော်သွားတဲ့ cerium tri-sulfates solutions, terbium di-sulfates solutions နဲ့ yttrium di-sulfates solutions တွေကို၊ solvent extraction processes ကိုအသုံးပြုပြီး rare earth element ဒြပ်စင်ကိုရယူပါတယ်။
Monazite Concentrate မှ၊ Ceric Oxide Extraction နည်းနဲ့ rare earth ကိုသန့်စင်တဲ့၊ စာတမ်း တစောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ သန်လျှင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ Dr. ကေသီလွင်၊ ဧလာ သတ္တုဗေဒ သုတေသနဌာနမှ မလွင်ဇာရွှေနဲ့ မနွယ်နွယ်စိုးတို့ (၂၀၀၈) ခုနှစ် ကရေးခဲ့တဲ့၊ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံဒေသ၊ မိုးမိတ်၊ ဟုမ္မလင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ သပိတ်ကျင်းနဲ့ ထားဝယ်မှ ကံဘောက်ဒေသတို့မှ heavy sand တွေကတဆင့်၊ Cerium ကို ခွဲထုတ်တဲ့နည်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုထားတဲ့ process ကတော့၊ Caustic Soda Digestion, Sulfuric Acid Digestion, Perchloric Acid Treatment နဲ့ Nitric Acid Treatment တွေကို၊ အသုံးပြုထား ပါတယ်။ စာတမ်းမှာ၊ ကိုးကားထားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ Cerium, A Guide to its Role in Chemical Technology, Mountain Pass, CA U.S.A, Molycorp, Inc. 1995, Extractive Metallurgy of Rare Earths, Gupta C.K. and N. Krishnamurthy, Taylor and Francis, CRC Press Ltd. 2004, Thorium Production Technology, Cuthbert F.L., 1958, Rare Earths, James B. Hedrick.2002, နဲ့ Rare Metals Hand Book. 2nd ed. Hample, A.Clifford, Robert E.Krieger Publishing Corporation, New York, U.S, 1967. တို့ဖြစ်ပါတယ်။
rear earth ဟာ placer deposit မှာ monazite mineral အနေနဲ့ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ placer deposit တွေထဲမှာ rear earth သာမက၊ Gold, Platinum group metals, Tin, Diamonds, Thorium, Titanium နဲ့ Uranium တွေပါရောနေတတ်ပါတယ်။
Fig. Black sand placer deposit
Fig. Beach placer deposit
(၁၉၄၈) ခုနှစ်အထိ India နဲ့ Brazil ရဲ့ placer sand deposits တွေမှ၊ ကမ္ဘာ့ အများဆုံး rear earth ore တွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိန္နိယနဲ့ ဘရာလ်ဇီးကတော့၊ placer deposit လို့ခေါါတဲ့ သဲအနည်တွေမှတဆင့် rear earth ကိုထုတ်ယူပါတယ်။ (၁၉၅၀) ခုနှစ်မှာတော့ South Africa နဲ့ (၁၉၆၀) မှ (၁၉၈၀) ခုနှစ်အထိ၊ California မှာရှိတဲ့ Mountain Pass rare earth mine တို့ဟာ၊ ကမ္ဘာ့အများဆုံး rear earth ore တွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ ရာနေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုထိလည်း India နဲ့ South Africa မှာ rear earth ore တွေတူးဖော်နေဆဲဖြစ်သလို၊ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Global production
တကမ္ဘာလုံးရဲ့ တနှစ် လိုအပ်ချက်ကတန်ချိန် (၄) သောင်းကျော်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံး rare earth ထုပ်လုပ်သူအဖြစ် China ကဝင်ရောက်လာပြီး၊ ဈေးကွက်ကို ကိုင်လှုပ်ကာ ခြိမ်းလားခြောက်လား လုပ်လာတော့ Australia, Brazil, Canada, South Africa, Greenland နဲ့ အမေရိကားတို့လည်း၊ (၁၉၉၀) လောက်ကတည်းက၊ ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ မိုင်းတွေကို၊ ပြန်ဖွင့်ရပါတော့တယ်။ တရုပ်ပြည်ဟာ (၂၀၁၀) မှ (၂၀၁၅) ခုနှစ်အတွင်း၊ တနှစ်ကို တန်ချိန် (၃) သောင်းခွဲသာ ထုတ်တော့မယ် လို့ကြေငြာထားပါတယ်။ rare earth တွေကို၊ မွန်ဂို လီးယားက Polymetallic Bayan Obo ဆိုတဲ့ deposit မှတူးဖော်ယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားကလည်း rare earth တွေပို့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Perak ပြည်နယ် Bukit Merah မှ Mitsubishi Chemical နဲ့ ဖက်စပ် ထုတ်လုပ်တဲ့ mine ကို၊ Environmental considerations တွေကြောင့် (၁၉၉၂) ခုနှစ်မှာပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ် အနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ် တခုဖြစ်တဲ့ Lai Châu ပြည်နယ် ကလည်း၊ rare earth ထွက်လို့ (၂၀၁၀) ခုနှစ် ကတည်းက စာချုပ်ချုပ်ကာ ဂျပန်ကိုပို့နေပါတယ်။
ဂျပန်မှာ recycling plants တွေဆောက်ပြီး၊ electronic waste နဲ့ အခြား waste မှတဆင့် rare earth တွေကို ပြန်ထုတ်ယူနေပါတယ်။ extraction အနေနဲ့ ဆွဲထုတ်ယူတာဖြစ်ပြီး၊ တန်ချိန် (၃) သိန်းလောက် အရံ အနေနဲ့ လှောင်ထားပါတယ်။ ပြင်သစ်မှာတော့ Rhodia group က၊ La Rochelle နဲ့ Saint-Fons မှာ၊ recycling plants တွေဆောက်ပြီး Fluorescent lamps, magnets နဲ့ batteries တွေမှ ပြန်ထုတ်ယူတာ တနှစ်ကို တန် (၂၀၀) ခန့်ရပါတယ်။
Nikko Tsuruga Recycle Co., Ltd., 1 Wakaizumi-cho, Tsuruga-shi, Fukui 914-0027, Japan. ဆိုတဲ့လိပ်စာပေးထားတဲ့ recycling စက်ရုံကို၊ (၂၀၀၉) ခုနှစ်တုန်းကဆောက်ခဲ့ပြီး၊ (၂၀၁၁) မှာ စလည်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တလကို Nickel (၆) တန်၊ Cobalt (၁၀) တန်၊ Manganese (၆) တန် နဲ့ Lithium carbonate (၁၀) တန် ထွက်ပါတယ်။ lithium-ion batteries အဟောင်းတွေကတဆင့် cobalt, nickel, lithium နဲ့ manganese သတ္တုတွေကို၊ ပြန်ထုတ်သလို၊ cathode materials တွေကိုလည်း ပြန်ထုတ်ပေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ recycling စက်ရုံမှာအသုံးပြုထားတဲ့ process ကတော့၊ "solvent extraction processes" ပဲဖြစ်ပါတယ်။ solvent extraction processes ကို သုံးရင်၊ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် waste management ကိုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
မလေးရှား၊ Perak ပြည်နယ် Bukit Merah မှ Mitsubishi Chemical နဲ့ ဖက်စပ် ထုတ်လုပ်တဲ့ rare earth mine ကိုပိတ်လိုက်ရတာကလည်း၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ rare earth ores သတ္တုရိုင်းတွေမှာရောနှောနေတဲ့ thorium နဲ့ uranium တွေကြောင့်၊ elements တွေကို သန့်စင်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ၊ radioactive slurry tailings တွေပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။
Fig. Summary of the range of tailings products
refining process မှာလည်း၊ toxic acids တွေကိုသုံးတဲ့အတွက်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ extensive environmental damage တွေကို၊ စစ်ဆေးအရေးယူဖို့ (၂၀၁၀) ခုနှစ်တုန်းက၊ (၅) လတိတိ၊ mine တွေပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ toxic waste တွေဟာ သောက်ရေ၊ သုံးရေနဲ့ ရေအမြစ်ထွက်ရာ general water supply source တွေနဲ့ ရောနှောကုန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
Lithium-ion batteries တွေကို၊ electronic gadgets တွေမှာအများအပြားထည့်သွင်း အသုံးပြုရ ပါတယ်။ နောင်လာမယ့်အနာဂါတ် low-carbon society မှာအသုံပြုကြမယ့်၊ hybrid နဲ့ electric ကားတွေမှာလည်း၊ lithium-ion batteries တွေကို power source အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သုံးရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် lithium-ion batteries အဟောင်းတွေကတဆင့် lithium ကိုပြန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစား လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Fukui မှ recycling စက်ရုံဟာ Waseda University, Nagoya University နဲ့ Ministry of Economy, Trade and Industry တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရှေ့ပြေးစမ်းသတ်စက်ရုံ အနေနဲ့စခဲ့ပြီး၊ အခုအခါ ဈေးကွက်တင် ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက facilities တွေကတော့၊ Pre-treatment and leaching facilities ဆိုတဲ့၊ raw material တွေကို အရည်ဖျော်ကာ၊ စစ်ထုတ်ယူမယ့် facilities ၊ Solvent extraction facilities နဲ့ Refining facilities တို့ပါဝင်ပါတယ်။
Solvent extraction facilities တွေမှတဆင့် manganese ကိုအရင်ဆုံးခွဲထုတ်ယူပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ Solvents တွေကတဆင့် cobalt ကိုထပ်မံခွဲထုတ်ပါတယ်။ cobalt ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ကျန်တဲ့ Solvents တွေမှ nickel carbonate တွေကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါ၊ Solvents တွေထဲမှာ lithium carbonate တွေသာကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ Solvent extraction facilities တွေမှတဆင့် manganese, cobalt, nickel နဲ့ lithium တွေကို၊ ဒြပ်စင်အနေနဲ့ပြန်လည်သန့်စင်တဲ့အခါမှာတော့ "metal magic" နည်းစဉ်ကိုသုံးပါတယ်။
နေစက်ြဝဋ္ဌာမဟာကြယ်စင်တန်းပေါက်ကွဲမှု supernova Nucleosynthesis ကြောင့်၊ ကမ္ဘာ့အပေါါယံမြေလွှာမှာ ဒြပ်စင်အသစ်တွေပေါါပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။ supernova ဆိုတဲ့ stellar explosion ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ ဒြပ်စင်တွေဟာ တခုနဲ့တခုရောနေပြီး၊ earth's crust လို့ခေါါတဲ့ ကမ္ဘာ့အပေါါယံမြေလွှာမှာ၊ exploitable deposit အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။ သတ္တုဒြပ်စင် အဖြစ်ရရှိဖို့ exploitable deposit တွေထဲမှ၊ ore processing အနေနဲ့ သန့်စင်ခွဲထုတ်ယူရပါတယ်။ rear earth mine တွေကိုလေ့လာကြည့်လျှင်၊ open-pit mine သို့မဟုတ် opencast mine တွေ အဖြစ်သာ၊ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ 'Mountain Pass' rare earth မိုင်းတွင်းကို ပိတ်ခဲ့တာ၊ ore processing သတ္တုထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်မှတဆင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ထိခိုက်ခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Mountain Pass ရဲ့ အပေါါယံမြေလွှာ deposit မှာ၊ နှစ်သန်းထောင်ပေါင်း (၁ ဒသမ ၄) ဘီလီယံသက်တမ်းရှိတဲ့၊ 'precambrian carbonatite' တွေတည်ရှိနေပါတယ်။ rare earth oxides တွေ (၈) % မှ (၁၂) % အထိပါဝင်နေပါတယ်။ (၁၉၄၉) ခုနှစ်က high radioactivity ရှိတဲ့၊ မိုင်းတခုအဖြစ် စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ (၁၉၆၅) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၅) အထိ၊ ကမ္ဘာပေါါမှာ rare earth အများဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့၊ သတ္တုတွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Mountain Pass မိုင်းတွင်းမှ rare earth သန့်စင်ထုတ်လုပ်ရာမှာ၊ အသုံးပြုတဲ့နည်းစဉ်ကတော့ 'solvent extraction' နည်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ solvent extraction မှ slurry tailings လို့ခေါါတဲ့ solid waste တွေကို၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါါပဲ၊ စနစ်တကျစွန့်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ Mountain Pass မိုင်းတွင်းရဲ့ rare earth သန့်စင်ထုတ်လုပ်ရာ၊ chemical processing နည်းစဉ်မှာ (၁၉၉၆) ခုနှစ်မှစပြီး၊ waste-water leaks ယိုစိမ့်မှုတွေ၊ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါါခဲ့ပါတယ်။ radioactive waste တွေဟာ၊ အနီးအနားမှ 'Ivanpah Dry Lake' ရေကန်ကြီးထဲကို၊ ဂါလံသိန်းနဲ့ချီပြီး၊ စီးဝင်ခဲ့တာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ (၁၉၉၈) ခုနှစ်မှာတော့၊ ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါါရေး အတွက် အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီး၊ ဒီ (၂၀၁၂) ခုနှစ်မှာတော့၊ rare earth ကိုပြန်လည် ထုတ်လုပ်မှာ၊ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာလည်း၊ rare earth သန့်စင်ထုတ်လုပ်ရာမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမဖြစ်ပေါါရေးအတွက် တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြီး၊ ထိန်းသိမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မလေးရှားမှာတော့ Perak ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါါခဲ့တဲ့၊ အိပ်မက်ဆိုးကြောင့် Australia သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္မဏီတခုနဲ့ rare earth ထုတ်လုပ်မယ့်၊ အစီအစဉ်ကို၊ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) လခန့်က၊ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာ ကြားရပါတယ်။
Reference : Science (Vol : 289, Page : 2326), "The Elements", Handbook of Chemistry and Physics, 89th Edition - 2009, Section 4, by C. R. Hammond, Editor - David R. Lide, CRC Press/ Taylor and Francis, Boca Raton, FL., Kyrgyz Chemical-Metallurgical Plant
Historical Separation Process, Rare earth elements critical resources for high technology, Haxel G, Hedrick J, Orris J. 2006. Reston (VA): United States Geological Survey. USGS Fact Sheet: 087‐02., China's Rare Earth Dominance, Wikinvest. Retrieved on 11 Aug 2010., JX Nippon Mining & Metals News Release, September 3, 2009. "Can the U.S. Rare-Earth Industry Rebound ?" Bourzac, Katherine, Technology Review, October 29, 2010, Castor, Stephen B. (2008). "Rare Earth Deposits of North America". Resource Geology 58 (4): 337., Jones, Adrian P; Wall, Frances; Terry Williams, C (1996). "origin and ore deposits". Rare earth minerals: chemistry. Springer. p. 105.
Image credit to : http://en.wikipedia.org/, http://electronic-recycling.ie/, http://rareearthinvestingnews.com/ , http://www.wikinvest.com/,
Posted by ဒူဒူကြီး at 23:59
110561mma3February 2012 at 08:09
Thanks for sharing this post.Du Du Gyi..... Now we know why Chinese Companies are so kneen to build Myit-Sone Dam in Kachin State. During the initial contruction stage alone...they have found & taken thousands of tonnes of rare earth ore into China across the border by trucks. After Prez U Thein Sein stop the Myit Sone project...Chinese has destroyed all the roads & evidents leading to rare earth mines area. Some rumours said that trucks are still carrying the ore across the border. It is happening in ethnic conflict area of Kachin-thus difficult to control or monitor the area. Initial rumours was that they are taking Gold ore...but it is turn out to be rear earth ore which are much more valuable than Gold. Just imagined if they continued minning the rear earth in Myit sone area & polluted the Ayerawaddy from there all the way down ??? environmental impacts & concequences to the livelihood living along Ayerawaddy will be devestating. How was this project was aprroved in the first place?
pawmyintoo 30 July 2012 at 11:22
excellent!plz keep on goin.
Optical displacement and measurement sensors
Hull/ Surface preparation and Painting
Insulation Class Rating
စက်ာပူ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အ...
Photoelectric sensor (၄)